Brown to replace Curran as Zimbabwe coach - Thatscricket Oneindia
Home » NewsBrown to replace Curran as Zimbabwe coach
Harare: Kevin Curran's reign as Zimbabwe coach ended on Monday as Zimbabwe Cricket (ZC) announced the appointment of Robin Brown with effect from Saturday Sept 1. Brown will now take charge of Zimbabwe at the 2007 ICC World Twenty20 tournament in South Africa. The 47-year-old Curran succeeded former West Indies all-rounder Phil Simmons in September 2005 and was in charge of Zimbabwe for 42 matches, winning nine and losing 28 while there was a tie against Ireland at the World Cup, a no result and three abandoned matches. In a statement, ZC said Curran, whose last series ended in a 3-0 whitewash against South Africa on Sunday, had been re-assigned but did not state the former Zimbabwe all-rounder's new role. "Zimbabwe Cricket has appointed Robin Brown as national coach, with effect from the first of September, 2007," read the statement. "The 56-year old former Zimbabwe captain takes over from Kevin Curran, who has been re-assigned." After his appointment, Brown said: "I am very lucky to get the job and I am excited about it. The guys are currently on a high. I hope I can continue with the re-building and get some positive results for Zimbabwe." Agencies
Read more about: icc, coach, twenty20, zimbabwe, world cup, robin brown, kevin curran, zc, phil simmons